ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Happy Birthday, Sweet
Happy Birthday, Sweet
အခုတစ်လော အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မလင်းလက်တစ်ယောက် အလုပ်တွေရှုပ် ၊ အရှုပ်တွေလုပ်ရင်း အွန်လိုင်း သူငယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ဝေး ၊ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကားမပြောနိုင်ဖြစ်နေတာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေး ဆွိသဉ္ဇာမွေးနေ့ကို မတော်တဆ မေ့သွားမိတယ် .. ။ သူဖုန်းဆက်မှ သိတော့ ရင်ထဲမကောင်းတော့ဘူး .. ။ အများကြီး တောင်းပန်ပါတယ် ချစ်သူငယ်ချင်းရယ် … ။
ဆွိသဉ္ဇာ … နာမည်လေး အေးသလို လူပုံစံလေးကလည်း မိန်းကလေးပီသစွာနဲ့ တော်တော်ကို ချောတဲ့ ၊ မြန်မာစာပေကို သိပ်မြတ်နိုးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် … ။ သူနဲ့စခင်တော့ ပလန်းနက်မြေမှာပါ . ။ ရင်တွင်းဖြစ်တွေ ရေးရင်း ပထမဦးဆုံးစခင်တဲ့ရက်မှာပဲ ညီမတွေလို တအားရင်းနှီးသွားကြတာ .. ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဘာမဆိုတိုင်ပင်တဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ် .. ။ စိတ်ချင်းကလည်းတူ ၊ အကြိုက်ချင်းကလည်းတူ ၊ မှန်ရာကိုမြတ်နိုး ၊ စာရေးတာချင်းလည်း ၀ါသနာတူ ၊ မြန်မာဆန်တဲ့အလှပကြိုက်တာချင်းလည်းတူ ၊ ပွင့်ပွင်းလင်းလင်း စကားကို ပြောတတ်ကြတာလည်းတူတဲ့ လင်းနဲ့ဆွိခင်မင်မှုက တော်တော်ကို လေးနက်ပါတယ် .. ။ ညီမသံယောဇဉ်လို ခင်မင်ကြပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြံပေးတိုင်ပင်ကြတဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာတာ ကံတရားကိုရော ၊ ပလန်းနက်ကိုရော ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
တိုက်ခိုက်သူတွေ ဘယ်လောက်များပါစေ ။ မုန်းတဲ့သူတွေ များစမ်းပါစေ။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ၊ အားပေးတဲ့မောင်နှမတွေ ၊ ၀ါသနာတူ မိတ်ဆွေတွေ ၊ အမြဲတမ်း ဘေးနားမှာ ရပ်ပေးတဲ့ ချစ်သူ ၊ ဒါတွေအားလုံးရဲ့ ခွန်အားနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ အမြဲတမ်း အားအင်တွေအပြည့်ပါပဲ။
ဧပရယ်လ် ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေး ဆွိမွေးနေ့မှ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ အပြည့်အ၀ရနေပါစေလို့ လင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုတွေပြည့်ဝစွာနဲ့ ဘ၀မှာ လိုချင်တာအားလုံးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေလို့ ချစ်သော ဆွိအတွက် လင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:34 PM
sweet thinzar said...
lin thank u so much. u mean so much to me. now im wordless. yin dae mar lae ngo chin dae. i promise ill be your best ssiter and best friend till the end of my breath. i love u lin.
TAG TAG တက်ကြစို့ ..
Fashion Image ( Chit Thu Thot )